UVenus Aries kunye noLeo bayabalingani bezemidlalo, kwaye nanku kukho intliziyo enzulu kunye nentando apha.
Ufumana inkokhelo ecaleni kwintando yakho yaseVenus Aries. Intshiseko yemvelo ekhoyo kukho umzimba wonke, kwaye imihla ihlala isasebenza. Ufuna ukubonisa omnye nomnye, kunye nezimpawu zeVenus ezinokuzithemba, ezicacileyo nezomnandiphe.
UVenus uLena kunye neVenus e-Aries
Wena kunye neVenus yakho i-Aries iqabane liyakuthatha inxaxheba ekuthandeni kwaye liziva lincinci xa liqala.
Ukuba iimpawu zomlilo, unomkhuhlane wothando unokwenzeka, kwaye intanda yakho ibonakalisa isigxina kuwe okwenza uzive ukhethekileyo.
I-Aries ithanda ibhenqo ihlawuliswa kakhulu. Kwaye u-Leo (Venus) uthanda uvela kuloo mbonakalo okhanyayo. I-twist apha, nokuba kunjalo, ukuba uVenus Aries uyacima nje ngokukhawuleza njengoko avula. Inokuvakalelwa ngathi ukushiywa ngaphandle kubanda, okanye ukugatywa, nangona oko kungenjalo. Esinye isisombululo kukuba uhlale uzimeleyo, kulolu thando, kwaye utyalomali ngokwendalo yakho. Ingumntu wakho ukuba uzibonakalise, kwaye le mpawu igcina i-Aries yakho ithandiweyo.
Uyakhangwa ekuzaleni ngokugcwele komthandi wakho. Unomdla wakho, ilanga kakhulu xa uziva umthandi wakho u-100% usebenza, ingqondo, umzimba kunye nomphefumlo. Ezi zihlandlo zikhunjulwa ngokuqinisekileyo, kwaye ukuba zingasondelanga, uzive uchithekile. Kubuhlungu kukuzikhukhumeza kwakho, ukuba iVenus yakho e-Aries ethandekayo ikhula ingapheliyo, inothando oluqhelekileyo.
Nasi sifumana kwiimpawu zesothando ezahlukeneyo, kunye no-Aries ukubonakaliswa kwesibonakaliso sesango kunye noLeo uphawu olumiselweyo oluzinzileyo. Ukuba u-Leo unelisekile, ingonyama okanye ingonyama inqwenela ukukhulula kwintuthuzelo yothando den. U-Leo, khumbula, ngumqondiso we-regal, kwaye oko kuhamba kunye nentsapho yasebukhosini okanye ukuzingca. UVenus u-Leo uyaneliseka kakhulu ngokusungula inkundla enesigxina, ifakwe xa kunokwenzeka.
Ukusuka apho, umcimbi we-embellishments kwaye ungeze kwixabiso. UVenus Leo ufuna ukubona ubukumkani bukhula.
UVenus Aries ugijima eshushu kwaye ebanda, kwaye i-chill ibuhlungu ngokukhethekileyo kuVenus Leo. I-style ye-Leo yothando ithandeka kakhulu ingqalelo (okanye ukungabikho kwayo) kwaye iyaziwayo ngenxa yekratshi. I-Venus Aries enomnqweno ingamlimaza ngenjongo yokulimaza uLover lover, engabonanga amehlo.
Umngeni we-adventure kunye nemingeni emitsha igcina umlilo uphile. Wena kunye nothando lwakho unqwenela ngamandla kwaye unesidingo sokuthandwa. Ukubheja okulungileyo kukuqondisa amandla akho ekuzibonakalisa, kunokulwa nomthandi wakho. Ubume bakho obunothando, ukuzithemba kunye nobuchule bemvelo ngumatshini weVenus Aries. Ukuba ngaba zimbini ziphepha i-lowball tricks okanye i-melodrama kwaye ubeke umgangatho wentlonelo emzimbeni, udibanisa kakuhle.
Venus Man Aries
Umfazi waseVenus Aries
I-Aries kunye neTaurus Love Compatibility
I-Virgo ne-Scorpio Uthando oluhambelanayo
Indlela Yokukhanga Umfazi We-Scorpio
I-Gemini ne-Aquarius Uthando oluhambelanayo
Kutheni I-Urine Ephuzi? Kutheni Ubunzima Ubunzima?
Iyintoni intsingiselo 'yeeNye kunye nokwenziwe' kwiKholeji yeBhola leKholeji?
Yonke Ngokuphathelele Ukunyamezela kunye neMitshato YamaPagan
In Situ kunye nezindlu ezakhiweyo